Creamy Broccoli Slaw (fomba fanamboarana akanjo mora) - Fomba Fanamboarana
ny fomba manapaka spiral cut ham
velveeta mac sy fromazy misy ham
inona no mandeha tsara amin'ny salady caesar
ronono voakolokolo mamy ny dibera voanjo
izay mandeha tsara amin'ny salady pasta
Creamy Broccoli Slaw dia crunchy, crispy, fahavaratra manampy barbecue, piknik na potluck! Ny broccoli voakiky dia mifangaro amin'ny paoma granith smith, cranberry maina mamy ary voana tanamasoandro mamirifiry natsipy tamina akanjo vita amin'ny crème tsotra!
Aroso amin'ny sisiny na ambonin'ity Sandwich vita amin'ny kisoa na koa fonosina na burger !
ny fomba fanaovana fries fromazy sakay ao anaty lafaoro
Inona no ao amin'ny Broccoli Coleslaw?
Maninona no manapa-kevitra eo a salady broccoli ary a creamy coleslaw rehefa afaka samy manana! Ity slug broccoli ity dia fitambarana marikivy, malefaka ary maro loko.
Fonosina amin'ny fibre sy sakafo mahavelona taonina, ity salady ity dia misy manaikitra mangirana miloko sy tsiro manjavozavo. Ny tsiranoka broccoli dia fifangaroana tahon-broccoli voakiky miaraka amin'ny karaoty julienned sy laisoa volomparasy somary mena.
Ny fangaro vita amin'ny tsiranoka broccoli dia azo vidiana saika amin'ny fivarotana enta-mavesatra rehetra miaraka amin'ireo salady voaangona.
mints manify vita an-trano miaraka amin'ny crackers ritz
voankazo : paoma granith smith, cranberry maina
Masomboly : voana tanamasoandro
akanjo : mayo, vinaingitra ary siramamy
To make Broccoli Slaw…
Ataovy amin'ny dingana telo mora ity salady ity!
henan'omby taco mandroboka marikivy fanosotra
salady : Maneteza paoma granithy smith ho matchsticks julienne na dice kely. Atsipazo amina ranom-boasarimakirana mba tsy haha-volontany azy ireo.
akanjo : Mba hanaovana akanjo mahamenatra ny broccoli dia afangaroy ny akora fitehirizana rehetra ary apetraka ao anaty vata fampangatsiahana mba hangatsiaka.
Atambatra: Atsipazo miaraka amin'ny akanjo mangatsiaka ny akora rehetra mba hampifangaroana.
Refrigerite adiny iray alohan'ny hanompoana.
Mitahiry Broccoli Slaw
Ny slay broccoli vita amin'ny crème dia haharitra 5 andro ao anaty vata fampangatsiahana raha mbola rakofana tsara.
Mety mila rarahana izy raha somary maheno, fa ampio voany tanamasoandro fanampiny ho an'ny crunch ary angamba vinaingitra iray!
Manompoa azy eo akaikin'ny…
Ny tsiranoka broccoli dia salady miovaova be toy izany mandritra ny taona! Scoop eo ambonin'ny farafara misy salady maitso mifangaro sy ambony miaraka aminy croutons na ampidiro anaty fonosana miaraka amin'ny slices an'ny bacon nandrahoina na mihoatra aza kisoa nisintona ! Manampia crunch crème amin'ny tianao indrindra hamburger .
ny fomba hitazomana ny lamba famaohana tsy maimbo
Arosoy miaraka amin'ny saosisy voaendy na amin'ny lafiny mahaliana an'i hotdogs mba hikolokoloana vaovao amin'ny barbecue fahavaratra!
Salady fahavaratra bebe kokoa
Salady Pasta Italiana - Reader Favorite!
Salady voanjo mainty sy salady - vaovao, mangatsiatsiaka ary manjavozavo
Dill Pickle Coleslaw - tsiro tsy manam-paharoa & matsiro!
Salady ovy Alemana - mafana tsara indrindra miaraka amin'ny bacon!
Salady Avocado voatabia - vonona ao anatin'ny 15 min
4.92From3. 4vato FAMERENANAResipeo
Fotoana fanomananadimy ambin'ny folo minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo0 minitra Fotoana manontolodimy ambin'ny folo minitra Fanompoana12 servings MpanoratraHolly Nilsson Ny broccoli voakiky dia mifangaro amin'ny paoma granith smith, cranberry maina mamy ary voana tanamasoandro mamirifiry natsipy tamina akanjo vita amin'ny crème tsotra! pirinty Pin
▢32 ounces fifangaroan-tsavony broccoli
▢1 paoma vy granny
▢1 sotrokely ranom-boasarimakirana
▢1 kapoaka cranberry maina
▢½ kapoaka voana tanamasoandro
▢½ kapoaka mayonnaise
▢rOA tablespoons vinaingitra
▢1 sotro siramamy
▢1 sotrokely voan'ny seleria
Tapaho ny antsasaky ny paoma smith granny ary esory ny masomboly. Hetezo silipo tsara julienne ary atsipazo amin'ny ranom-boasarimakirana.
Afangaro ny akanjon'ny akanjo rehetra ary apetraho.
Atambatra anaty lovia lehibe ny fangaro rehetra. Manampia akanjo ary atsipazo hifangaro.
Ampidirina anaty rano mandritra ny adiny 1, fara fahakeliny, alohan'ny handrosoana.
Kaloria:161,Karbohidraty:17h,Proteinina:4h,Tavy:10h,Tavy mahavoky:1h,Cholesterol:4levitra,Sodium:81levitra,Potasioma:302levitra,Fibre:1h,Sugar:9h,Vitamina A:317IU,Vitamina C:71levitra,Kalsioma:46levitra,Vy:1levitra
Teny lakilebroccoli slaw, coleslaw Mazava ho azySakafo an-daniny masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .